Nezve Recetín | Recipe
Recipe iri blog kwaunowana akawanda ekutanga mabikirwo evana uye neavo vasina kudaro vadiki, kubika manomano uye ruzivo nezve zvese zvine chekuita nenyika yekubika.
Kana iwe uchida kuziva nezvese zvinoitika munyika yekubika Nyorera kuzvinyorwa zvedu neemail yako, kwaunogashira ipapo ese mabikirwo, mabikirwo ekubika uye nhau dzinonakidza kwazvo.
Chii chatinotaura nezvacho muRecetín?
En Recipe iwe unowana maresipi ekutanga, echipiri, ekutanga, madhiri maresipi kubva pasirese pasirese uye zvidobi kune vadiki kuti vadzidze kudya zvese.
Misoro yatinotaura nezvayo muRetetín inogona kuwanikwa pane peji rezvikamu zvewebhu.
Isu tine hanya nevaverengi ... zvakanyanya
Recipe, pamusoro pekuve blog paunogona kuverenga nekudzidza nezvekubika mabikirwo, zvakare inotarisira kuve portal yekubatsira vedu vaverengi, nzvimbo yekupindura mibvunzo uye kukubatsira iwe paunenge uchigadzira mamenu evana vadiki, dzidza hunyengeri kuti uve ne kudya zvine mwero uye kunakidzwa mukicheni. Iwe unogona kutaura pane zvakaburitswa, titumirei nhau, mazano, kusahadzika, zvido kana mabikirwo kuburikidza neyedu fomu yekutaurirana.
Ese mapepa ayo aripo muRecetin akagadzirwa neyedu Chikwata chekunyora. Vese vapisi vane makore mazhinji echiitiko vachigadzirira ndiro dzakanyatsogadzirirwa vana, saka garandi yacho ndeyevabereki.
Ungashambadza sei kambani yako kana chigadzirwa muRetetín?
Kana kambani yako kana chigadzirwa zvine chekuita nenyika yekubika, unogona kutirovera runhare kuburikidza needu fomu yekutaurirana uye isu tichapindura nekukurumidza sezvinobvira nechisarudzo chekushambadzira chinoenderana neicho chaunoda.
Kana iwe uchida kutaura Recipe unogona kuzviita kuburikidza neyedu fomu yekutaurirana.